Marka aad shaqo la'aan tahay, waxaad fursad u heli kartaa in aad gunno ka hesho caymiska shaqo la'aanta inta aad shaqo raadsaneysid. Gunnada waxaad ka dalbanaysaa qasnaddaada shaqo la'aanta. Halkan ayaad ka akhrisan kartaa sida aad u codsaneysid, waxa loo baahanyahay si loo helo gunnada iyo inta lacag ah ee aad heli karto.
Muxuu yahay caymiska shaqo la’aanta?
Filimku wuxuu sharraxayaa waxa uu yahay caymiska shaqala'aantu, wuxuuna qeexayaa shuruudaha gunnada.
Sidee ayaan gunnada uga dalbadaa qasnadda shaqa la'aanta?
Maalinta ugu horreysa ee aad shaqa la'aan noqotid iska diiwaangeli Xafiiska shaqada, sheegna inaad doonayso inaad qasnadda shaqa la'aanta ka dalbato gunno.
Gal bogga qasnaddaada shaqa la'aantaada oo ka codso gunno. Halkaas waxaad ku arkeysaa xogta ay tahay inaad bixiso si aad u hesho jawaab ku aaddan inaad xaq u leedahay gunno iyo in kale.
Haddii aadan xubin ka ahayn qasnad shaqa la'aan, waxaad xubinnimo codsan kartaa marka aad shaqa la'aan noqoto. Waxaad taas ka samaynaysaa barta intarneetka ee qasnadda shaqa la'aanta. Haddii aadan rabin inaad xubin ka noqotid qasnad shaqa la’aan waxaad gunno ka dalban kartaa qasnadda Alfa.
Hel qasnaddaada shaqa la’aanta
Maxaa loo baahanyahay si gunno looga helo qasnadda shaqa la'aanta?
Si aad gunno uga hesho qasnadda shaqa la'aanta, waa inaad shaqalaawe ahaan uga qorantahay xafiiska shaqada. Waa inaad awooddo oo aad rabto inaad isla markiiba shaqo qaadato. Waa in aysan jirin wax kuu diidaya in aad codsato oo aad qaadato shaqo. Haddii aad carruur leedahay, waa inaad xannaano u haysataa ilmaha. Xaaladda caadiga ah, waa inaad sidoo kale joogtaa Iswiidhan oo aad dhammaysatay wixii waxbarasho ah. Wixii macluumaad ah ee dheeri ah ee ku saabsan waxa khuseeya xaaladdaada gaarka ah kala xiriir qasnaddaada shaqa la'aanta.
Si aad gunno xaq ugu yeelato, waa inaad sidoo kale hore u soo shaqeysay. Waa inaad buuxisaa mid ka mid ah shuruudaha soo socda:
Waa inaad, sanadkii la soo dhaafay, shaqeysay ugu yaraan 6 bilood oo aad ugu yaraan 60 saac bil kasta ka shaqeysay.
Waa inaad sanadkii ugu dambeeyay ka shaqeysay ugu yaraan 420 saacadood muddo 6 bilood ah oo xiriira oo leh ugu yaraan 40 saacadood bil kasta.
Haddii aad tusaale ahaan ku jirtay fasax waalid, jirro ama aad wakhti buuxa wax baranaysay, waxaad xisaabsan kartaa shaqadii wakhtigii markaas ka horreeyay.
Haddii ay qasnaddaada shaqo la'aantu kuu sheegtay inaadan gunno xaq u lahayn, waxaad la xiriiri kartaa degmadaada si aad u codsato taageero dhaqaale.
Ilaa intee lacag ah ayaan qaadanayaa?
Inta lacag ah ee aad qaadaneyso waxay ku xirantahay inta aad shaqeysay, dakhligaagii hore iyo inta aad xubin ka ahayd qasnadda shaqa la'aanta. Waa qasnaddaada shaqa la'aanta cidda go’aan ka gaareysa gunnada iyo cidda xisaabineysa inta aad xaq u leedahay gunno ahaan.
Gunnadu waxay ku salaysantahay dakhligaaga
Haddii aad ugu yaraan hal sano xubin ka ahayd qasnadda shaqa la'aanta, waxaad heli kartaa ilaa 80 boqolkiiba oo ka mid ah mushaharkaagii hore. Waxa aad heli kartaa ugu badnaan 26,400 oo koron bishiiba, cashuurta ka hor.
Gunno aasaasi ah
Haddii aadan qasnad shaqa la'aan xubin ka ahayn ama aad in ka yar hal sano xubin ka ahayd, waxaad heli kartaa gunno aasaasi ah. Waxaad heli kartaa ugu badnaan 11 220 karoon bishiiba cashuurta ka hor, taas oo ku xiran ilaa inta aad horay u soo shaqaysay. Waa inaad sidoo kale 20 sano buuxisay.
Ilaa intee ayaan waqti ahaan qaadan karaa gunno?
Muddada gunnadu waa 300 oo maalin-gunno. Waxaad ugu badnaan gunno qaadan kartaa shan maalmood toddobaadkiiba. Haddii aad leedahay carruur da'doodu ka yartahay 18 sano si ootomaatik ah ayaa laguugu darayaa 150 maalin-gunno. Haddii aadan shaqo helin 300 oo maalin-gunno ka dib, waxaa laguu soo jeedin karaa inaad ka qayb qaadato barnaamijka dammaanad-qaadka shaqada iyo horumarka.
Barnaamijka dammaanad-qaadka shaqada iyo horumarka
Maxaan u baahanahay inaan sameeyo haddii aan qaato gunno?
Si aanad khatar ugu gelin inaad gonno la'aan noqoto, waxaad u baahantahay inaad raacdo qorshaha aan isla sameyno, firfircoonaato, bil walbana shaqooyin badan raadsato. Waxaad u baahantahay inaad ka qaybgasho shirarka ballansan iyo hawlaha kale ee aan ku heshiinno. Haddii ay yimaadaan wax ku xannibaya, waa inaad na soo ogeysiisaa.
Haddii lagu siiyo shaqo habboon ama taageero dheeri ah iyadoo loo marayo barnaamij, waa inaad taa aqbashaa. Waa inaad sidoo kale, bil walba inta u dhaxaysa 1-da ilaa iyo 14-ka, noo soo gudbisaa warbixinta dhaqdhaqaaqaaga.
Haddii aad rabto in aad koorso dhigato ama aad waxbarato adigoo shaqa raadsanaya, gunnana ka qaadanaya qasnadda shaqa la'aanta, waa in aad marka hore la xiriirtaa qasnaddaada shaqa la'aanta. Iyaga ayaa go'aan ka gaaraya inaad saas samayn karto, isla markaana aad gunnadaada qaadan karto in kale.
Waa muhiim inaad ogaato waxa aad u baahantahay inaad sameyso iyo sida ay u saameyn karto gunnadaada haddii aadan ka soo bixin waajibkaaga shaqa raadinta, ama aad dheereyso ama sabab u noqoto shaqa la'aantaada.
Soo gudbi warbixinta waxyaabaha aad qabato
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid la xiriir qasnaddaada shaqa la'aanta
Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan lacag qaadashadaada, xubinnimadaada ama wax kasta oo kale oo la xiriira gunnada, waxaad la xiriireysaa qasnaddaada shaqa la'aanta. Bogga internetka ee qasnadaha shaqa la'aanta ee Iswiidhan ayaad ka heleysaa meelaha lagala xiriiri karo dhammaan qasnadaha shaqa la'aanta.
Khasnadaha shaqa la'aanta ee Iswiidhan
Bogga internetka ee Hej a-kassa ayaad ka heleysaa hagitaan, marka aad dooranayso qasnadda shaqa la’aanta.
Gunno dibadda u qaado si aad shaqo uga raadsato Yurub
Haddii aad Iswiidhan gudeheeda xaq ugu leedahay gunnada qasnadda shaqa la'aanta, waxaad codsan kartaa inaad gunnadaada dibadda u qaadato si aad shaqo uga raadsato waddan kale oo ah EU / EES, Switzerland, Boqortooyada Ingiriiska ama Waqooyiga Ireland.
Waa inaad gabi ahaanba tahay shaqa la'aan oo aad ka diiwaangashanayd Xafiiska shaqada ugu yaraan afar usbuuc, kadib markii aad shaqa la'aan noqotay.
Maskaxda ku hay inaad codsiga sameyso intaadan safrin ka hor. Waxaad codsiga u gudbineysaa Hay'adda Kormeerka Caymiska Shaqa la'aanta, IAF.
Codsiga caddeynta ku aaddan in shaqo laga raadsado Yurub gudeheeda (bogga intarneetka ee IAF)